‘करिब १००० जना लिम्बुहरु एनआरएनए यूकेको सदस्य’ ? - Khusi Limbu
‘करिब १००० जना लिम्बुहरु एनआरएनए यूकेको सदस्य’ ?
Home - Blogs - ‘करिब १००० जना लिम्बुहरु एनआरएनए यूकेको सदस्य’ ?
हिजो प्रकाशित NRNA UK को सदस्य लिस्टमा ४५० जना लिम्बुहरु रहेको खबर अहिले बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ । यदि यसलाई आधिकारिक मान्ने हो भने १३,८९० जना सदस्यहरुमा ४५० भनेको कुल सदस्य संख्याको ३.२४ % लिम्बुहरु सदस्य रहेछन् ।
(अन्य जातिहरुमा भन्दा लिम्बुहरुमा चेतनाको स्तर बढी भएर यस्तो भएको भन्नेहरु एकातिर छन् भने अर्कोतिर Ganesh Ijam र Biswasdip Tigela जस्ता एनआरएनएका हेभीवेटहरु अहिले याक्थुङ चुम्लुङ यूकेको कार्यसमितिमा हुनु र Khusi Limbu – page जस्तो ‘चल्तापूर्जा’ मिडियामा हुनुले हो भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।)
अघिल्लो चुनाउमा Khusi Limbu उम्मेद्धार हुँदा बेलायतमा रहेका २०,००० जना लिम्बुहरुमध्ये सिंङगै ९० जना सदस्य बनेका थिए । त्यस्तै २०१५ चुनाउमा विस्वासदीप तिगेला अध्यक्षको उम्मेद्धार बन्दैगर्दा सिङ्गै १२० जना सदस्य बनेका थिए । २० हजारमा ९० र १२० भनेको क्रमशः सिंगो ०.४५ % र ०.६ % हो । त्यस हिसाबमा अहिले Bimala Limbu ले र Lila Seling Mabo ले उम्मेद्धारी दिंदा ४५० जना लिम्बुहरु सदस्य हुनु भनेको बहुत राम्रो हो ।
अघिल्लो पटक लुङवाबा खुशी उम्मेद्धार हुँदा सदस्यता शुल्क £२५ भएकोले लिम्बुहरु भागाभाग गरेका थिए । तर पनि २०१५ मा भने शुल्क £१० नै थियो । त्यस हिसावमा उसखेर तरेबा विस्वासदीप तिगेलाको भन्दा पनि अहिले मेन्छ्यामाहरु लिला र बिमलाको ‘वुमिन पावर’ र ‘मार्केट भ्यालु’ बलियो देखियो ।
झण्डै १४००० सदस्यहरुको नामावली २६७ पेजको पीडीएफमा प्रकाशित भएको रहेछ, मैले आफ्ना अल्छे आँखाहरुलाई दुःख दिन चाहिन । तर Peepal Mortgages Limited वा अन्य त्यस्तै निकायले निकालेको संख्या ४५० मा भने मलाई शंका छ । त्यो किनभने घले गुरुङहरुले घले लेख्ने गरेपनि घोताने, लामा, लामिछाने, चार्ला, क्लाप्ह्री, ङोर्मे, पच्युः आदि सबैले गुरुङ नै लेख्छन् । त्यस्तै राईहरुले पनि कमले मात्रै साम्पाङ, चाम्लिङ वा वान्तावा लेख्ने गरेका छन् । तर अधिकांश लिम्बुहरुले त लिम्बु नलेखेर आफ्नो थरमै नागरिकता निकालेको छन् ।
उदाहरणहरुका लागि पाँचथर समाज सेवा यूके को तीनै जना पूर्व अध्यक्षहरुले लिम्बु नलेखेर Subash Jabegu, Ekraj Nembang र Narbir Angbo लेख्छन् । अहिले वर्तमान उपाध्यक्षहरुमा शान्ति खिम्दिङले Shanti Limbu लेखे पनि अन्य उपाध्यक्षहरुले Nagendra Nembang, Hangpal Makhim, Yadhuchandra Lawati लेख्छन् । त्यस्तै महासचिबले Khusi Limbu लेखेपनि सचिबहरुले Prem Suhang, लिम्बू टेक-सुहाङ नै लेख्ने गरेका छन् ।
यता ताप्लेजुङ समाज यूकेका पूर्व अध्यक्षको पनि औपचारिक नाम डा. चन्द्र कुमार लक्सम्बा हो भने वर्तमान महासचिबले पनि Janu Kambang लिङदेन लेख्छिन् । उता तेह्रथुम समाज यूकेको निवर्तमान र वर्तमान अध्यक्षहरुको नाम पनि क्रमशः सूर्य Lothik Khapung र Dammar Singakहो । लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेका महासचिबको नाम लाहाङ चेम्जोङ, लिम्बु पत्रकार यूकेको अध्यक्षको नाम Amit Yakthungba Mihaang र सचिबको नाम Srijana Ningleku हो ।
यस्ता उदाहरणहरु कैयौं छन् ।
यस अर्थमा र यदि हिजो प्रकाशित मित्र Sushil Prajapati को स्ट्याटसलाई आधार मान्ने हो भने नेवारहरुमात्र होइन लिम्बुहरु पनि गोटा १००० जति एनआरएनए यूकेका सदस्य बनेका छन् । त्यो किनभने प्रकाशित ४५० जना लिम्बुहरु र ५०० भन्दा बढी लिम्बु थरहरु छन् ।
अब १३,८९० जनामा वास्तवमा कति जना लिम्बुहरु छन् त ? यो जिम्मा मैले आगामी चुनाउका उम्मेद्धारहरुलाई नै छोडें ।